नुवाकोटमा १ अर्बको आलु उत्पादन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नुवाकोटमा १ अर्बको आलु उत्पादन
बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५० मा प्रकाशित !
९ चैत​, त्रिशूली । नुवाकोटमा यस वर्ष एक अर्ब १० करोडको आलु उत्पादन भएको छ । बर्खे र हिउँदे याममा गरी ७२ हजार ७०० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा कमलराज गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष ८७ करोड बराबरको तथा अघिल्लो वर्ष ८५ करोड बराबरको आलु उत्पादन भएको थियो ।
“अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु लगाउने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएको छ,” गैरेले भने, “किसानले व्यावसायिक रुपमा सुरु गरेको खेती प्रणाली र पद्धति सही रुपमा अवलम्बन गर्दा आलुमार्फत जिल्लामा ठूलो रकम भित्र्याउन सफल भएका छौँ ।”
जिल्लामा यस वर्ष आलुको उत्पादनमा वृद्धि तथा उचित मूल्य पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन । स्थानीय बजारमा अहिले आलुको मूल्य प्रतिकिलो १३ देखि रु १५ मा कारोबार हुँदा किसान प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँसम्म नाफा गर्न सफल भएका खानीगाउँका भीमप्रसाद ढकाल बताउँछन । “व्यापारी आलु खरिद गर्न खेतमै आउने गरेकाले बजारको समस्या छैन,” ढकालले भने ।
जिल्लामा दुई याममा गरी चार हजार ३०० हेक्टरमा आलु लगाइएको छ । प्रतिहेक्टर करिब १७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गैरेले बताए । “अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,” उनले भने ।
जिल्लाको चौघडा, खानीगाउँ, गणेशस्थान, नर्जामण्डप, थानसिंह, खरानीटार, बेलकोट, मदानपुरलाई आलु उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । जिल्लामा उत्पादन भएको आलु खरिद गर्न काठमाडौं, तनहुँ, पोखरा, बुटवलका व्यापारी आउने गरेका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: जिप्रका बाँकेद्वारा हतियार बुझाउन आग्रह
NEXT POST Next post: लाङटाङमा स्थानीय बासिन्दाद्वारा स्वास्थ्य र सुरक्षाको माग
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०८:५०